इमेज साप्ताहिक : 2017-08-27
प्रोपर्टी टुडे अनलाईनमा साढे दुई वर्ष अघि प्रकाशन भएको नुवाकोटको केही जानकारी
Posted by image weekly (इमेज साप्ताहिक) at Friday, September 01, 2017 No comments:
नुवाकोट अदालतमा न्याय खरिद विक्रि हुन थालेको भन्दै सरोकारवालाको चिन्ता व्यक्त, वारका अध्यक्ष भन्नुहुन्छ ः न्यायधिशलाई पैसा दिनुपर्यो भन्दै आउछन् ।
नुवाकोट । जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख सन्तमान तामाङले वकिल र न्यायधिशले वकालत तथा न्याय सम्पादन ब्यवहारिक पक्षलालई पनि हेर्नु जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । नुवाकोट जिल्ला अदालत वार एशोसियशनको आज विदुरमा आयोजित ११ औं बार्षिक साधारण सभालाई सम्वोधन गर्दै उहाँले नियतवस अपराध गर्ने र नियतीले अपराधी बनाउने बीच सजायको भिन्नता हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तामाङले द्धन्द्धको समयमा आम नागरिकहरुले न्याय नपाएको र अहिले जनप्रतिनिधि समेत निर्वाचित भएकोले नेपालमा न्याय पुर्नस्थापना भएको बताउनुभएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख सन्तमान तामाङले कानुन ब्यवसायी तथा न्यायलयतका कारण केही निरअपारधी पनि अपराधी बनेको बताउनुभएको छ । उहाँले कानूनको ब्याख्या गर्ने र ऐन कानूनका विषयमा नागरिकहरुलाई जानकारी गराउने सम्मको कार्य कानुनव्यवसायीहरुको रहेको बताउनुभएको छ ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ नुवाकोटका अध्यक्ष कपिलदेव खनालले जिल्ला अदालत नुवाकोटमा आर्थिक चलखेल हुने गरेको नागरिकहरुको टिप्पणी रहेको बताउनुभयो । अदालसम्म पैसाको झोला पुग्ने गरेको र त्यसबाट न्याय प्रभाबित भएको गुनासो आजभोली ब्यापक रहेको उहाँले बताउनुभएको छ ।
जिल्ला अदालत नुवाकोटका श्रेस्तेदार महिमानसिंह बस्नेतले भने त्यसको बचाऊ गर्नुभएको छ । काम गर्ने क्रममा सामान्य केही कमजोरी रहेको भए अलग पाटो रहेको उल्लेख गर्दै पछिल्लो छ महिनाको अवधिमा नुवाकोट अदालतमा आर्थिक लेनदेनमा मुद्दा छिनोफानो नभएको बताउनुभएको छ ।
नुवाकोट जिल्ला अदालत वार एशोसियसनका अध्यक्ष देवराज कँडेलले कानुन व्यवसाय ब्यवसायको रुपमा गरे पनि समुदायसंग जिम्मेवार बनेर वकिलहरुले कार्य गरिरहेको बताउनुभएको छ । कानुनको भाषा र न्याय सम्पादनको प्रक्रृया नागरिकहरुले नबुझे पनि अदालतले कानून बोमिजिम हुनु पर्ने आफुलाई लागेको बताउनुभयो । फैसला प्रभावमा परेर पनि हुने गरेको नागरिकहरुको गुनासो आइरहेको भएपनि देखिने गरी नआएकोले आफु यस विषयमा बोल्न नसक्ने अध्यक्ष कँडेलले बताउनुभयो ।
नुवाकोट जिल्ला अदालत वार एशोसियसनका अध्यक्ष देवराज कँडेलले न्यायधिशलाई पैसा पु¥याउन वकिलसम्म नागरिकहरु आउने गरेको बताउनुभएको छ । तर अहिलेसम्म कनै पनि वकिलले मुद्दा मिलाउनका लागि न्याधिशलाई पैसा नखुवाएको उहाँले बताउनुभयो । जसरी पनि मुद्दा जित्ने पर्ने मनस्थितिमा रहेकाहरुले न्यायधिशलाई मिलाईदिनु भन्दै पैसा दिन आउने गरेको उहाँको भनाई छ ।
नुवाकोट जिल्ला अदालत वार एशोसियसनको ११ औं साधारण सभामा विभिन्न वक्ताहरुले न्याय खरिद विक्रिमा गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । वकिलहरुको छाता संगठन वार एशोसियसनले नागरिकहरुको भरोषा मर्न नदिनका लागि न्याय क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक पहल कदमी लिन पनि आग्रह गरेका छन् । साथै गाउा गाउामा स्थापना भएको सामुदायिक मेलमिला केन्द्रले मिलाउन नमिल्ने मुद्दालाई पनि गाउँघरमै मिलाउन थालेको र गैर सरकारी संस्थाले न्याय दिने अभियान सञ्चालन गरेर नागरिकहरुलाई मर्का पर्न थालेको विषयमा समेत साधारण सभा उद्घाटन समारोहमा चर्चा भएको छ ।
कार्यक्रममा ललितपुर वारका सदस्य गोपी भण्डारी, नुवाकोट उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष ताराबहादुर कार्की, प्याब्सन नुवाकोटका अध्यक्ष बुद्धिसगर रिजाल, गैर सरकारी संस्था महासंघ नुवाकोटका अध्यक्ष मिनकुमार केसी र नेपाल चेम्वर अफ कर्मश नुवाकोटका अध्यक्ष कविन्द्रमान प्रधानले मन्तब्य राख्नुभएको थियो ।
यसै बीच, नुवाकोट वारले निर्माण थालेको भवनको लागि कार्यक्रममा सहभागिहरुले आर्थिक सहयोग प्रदान गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष कपिलदेव खनालले रेडियो त्रिशुलीको तर्फबाट १५ हजार रुपैयाँको चेक नुवाकोट वारका अध्यक्ष देवराज कँडेललाई हस्तान्तरण गर्नुभयो । त्यस्तै जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख सन्तमान तामाङले आफ्नो व्यक्तिगत नाममा पाँच हजार पाँच सय रुपैयाँ प्रदान गर्नुभयो ।
त्यस्तै नुवाकोट वार भवन निर्माणका लागि गैर सरकारी संस्था महासंघ नुवाकोटका अध्यक्ष मिनकुमार केसीले २० हजारले उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभएको छ । यस्तै नुवाकोट उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष ताराबहादुर कार्कीले संघको तर्फबाट १० हजार एक सय ५५ रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । प्याब्सन नुवाकोटका अध्यक्ष बुद्धिसागर रिजालले पनि संस्थागत रुपमा केही आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्नुभएको छ ।
नुवाकोट जिल्लालाई कात्तिक मसान्तसम्ममा खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारी तयारी, तर जिल्लाका पाँच हजार भन्दा बढी घरमा शौचालय निर्माण हुनै बाँकी
नुवाकोट जिल्लालाई कात्तिक समान्तसम्ममा दुल्ला दिसा मुक्त क्षेत्र घोषणा गराइने भएको छ । भुकम्प पछिको भौतिक संरचना ध्वस्त भएको जिल्लामा शौचालयको पुन निर्माणमा पूर्ण नआएादै गरिएको यो हत्तार ववादमा रहेपनि घोषणा तयारी थालिएको छ ।
अबको ठीक साढे दुई महिना पछि नुवाकोट जिल्लाको सबै घरधुरीमा शौचालय निर्माण भएको घोषणा सरकारी पक्षबाट हुने छ । आज आयोजित जिल्ला समन्वय समिति, नगर तथा गाउँपालिकाका प्रमुख, उप प्रमुख, कार्यकारी अधिकृतहरुलाई सरसरफाई र स्वच्छता सम्वन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रम गरेर उक्त जानकारी दिइएको हो ।
खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय नुवाकोटको आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रमलाई ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति फण्डवोर्डले सघाएको थियो । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका सबै पदाधिकारीहरु, स्थानीय विकास अधिकारी, जिल्लाका सबै गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख तथा उप प्रमुख, यो अभियानमा लागेको जिल्लाका केही गैर सरकारी संस्थाका पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय नुवाकोटका निम्त्रि प्रमुख विश्वजित कायस्थका अनुसार नुवाकोट जिल्लाको पुरानो संरचनाको आधारमा २५ वटा गाउँ विकास समितिहरु पूर्ण रुपमा खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भईससकेको छ ।
नुवाकोट जिल्लामा ६५ हजार ४ सय १५ घरधुरी रहेको तथ्याङ्क रहेको खानेपानी कार्यालयका अनुसार ९१ प्रतिशतमा सरसफाई, ८३ दशमलव १४ प्रतिशत खानेपानीको कभरेज रहेको छ । अब ७ वटा गाविस खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा हुने, १४ वटाको अनुमगनको तयारी रहेको बताइएको छ । एक महिना अघि दुप्चेश्वर गाउँपालिकालाई नै खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिसकिएको छ ।
कार्यक्रममा सहभागिहरुले भने कार्यक्रम कागजमा मात्रै सिमित हुने खतरा बढेको तर्फ संकेत गरेका थिए । तर सरकारले नै अबको साढे दुई महिना भित्र जिल्लालाई नै खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने योजना पहिलानै तय गरिसकेकोले स्थानीय तहले त्यसलाई आफ्नो कार्यक्रमका रुपमा ग्रहण गरेर अभियान अगाडी बढाउनु पर्ने बताइएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय नुवाकोटका अनुसार जिल्लामा अझै पाँच हजार घरमा शौचालय बन्न बाँकी रहेको छ । त्यसका साथै त्रिशुली बजारमा स्थानीयहरुले ढललाई सिधै त्रिशुली नदीमा हालेकोले पनि जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न समस्या भएको कार्यक्रममा बताइयो ।
जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख सन्तमान तामाङले ईच्छाशक्ति भएको जिल्लालाई नै घोषणा गर्न सकिने भएपनि केही प्राविधिक कठिनाईका कारण मंसिरको अन्तिमसम्ममा यो अभियानलाई पु¥याउन सकेमा प्रभावकारी हुने धारणा राख्नुभयो ।
विदुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डितले अबको दुई महिना भित्रमा विदुर नगरपालिकालाई खुल्ला दिसामुक्त षेत्र घोषणा गर्न नसकिने र त्यसका लागि आउँदो असार मसान्तसम्म कुर्नु पर्ने बताउनुभएको छ । बेल्कोटगढी नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्ररमण खनालले बेल्कोटगढी नगरपालिकामा पनि दुई महिनामा खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा सम्भावना नभएको बताउनुभएको छ । यस्तै, शिवपुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकृष्ण थापाले घोषणा गरिएको गाउँहरुमा अनुगमन गर्दा शौचालय नभेटिएको र काजगमा मात्रै खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भएको बताउनुभएको छ ।
दोश्रो नुवाकोट दसैं महोत्सवको तयारी तिब्र
दोश्रो नुवाकोट दसैं महोत्सव सफल बनाउनका लागि आयोजकले आफ्नो अभियान र गतिविधिलाई तिब्र पारेको छ ।
असोज २ गतेदेखि असोज ११ गतेसम्म आयोजना गरिएको महोत्सव त्रिशुली बजार स्थित त्रिशुली माध्यामिक विद्यालयको प्राङ्गणमा हुने छ । महोत्सव सम्पन्न गर्नका लागि आयोजक संस्था त्रिशुली युथ स्पोर्टस् क्लव तथा महोत्सव आयोजक मुल समारोह समितिले नुवाकोट उद्योग बाणिज्य संघसित छलफल गरेको छ ।
दसैंको फुलपातीको दिनसम्म सञ्चालन हुने महोत्सवमा स्थानीय व्यवसायीहरुले बढी सहभागिता जनाउन पाउनुपर्ने माग जिल्लाका ब्यवसायीहरुको रहेको थियो । दसैंकै लागि लक्षित गरेर आयोजना गरिएको महोत्सवमा आफुहरुको ब्यापक सहभागिताको माग लिएर जिल्लाका ब्यवसायीहरु आएकोले छलफल भएको जनाइएको छ ।
महोत्सव मुल समारोह समितिका पदाधिकारी, नुवाकोट उद्योग बाणिज्य संघका पदाधिकारी र जिल्लाका ब्यवसायीहरु बीच भएको सहमती अनुसार आयोजकले नुवकोटका ब्यवसायीहरुलाई स्टल २५ प्रतिशत छुटमा उपलब्ध गराउने छ । नुवाकोट उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष ताराबहादुर कार्कीका अनुसार बाहिर जिल्लाका ब्यापारीहरुबाट लिईने स्टल शुल्क भन्दा नुवाकोटका ब्यवसायीसंग २५ प्रतिशत कम शुल्क लिइने छ ।
ब्यवसायीहरुको आम्दानकिो मुख्य समय दसैं रहेको र त्यस बेलामा आयोजना गरिएको महोत्सवले ब्यापार प्रभावित हुने गुनासो स्थानीय ब्यापारी तथा ब्यवसायीहरुको आएको संघका अध्यक्ष कार्कीले बताउनुभयो । स्थानीय ब्यवसायीको हितका लागि स्टल खरिद तथा विक्रिमा पनि आयोजक संस्थसंग सहमती गरिएको बताइएको छ । लिखित रुपमा भएको सहमती अनुसार दोश्रो नुवाकोट दसैं महोत्सवमा ३५ वटा स्टल स्थानीय ब्यपारीहरुले पाउने छन् । जसमा रेडिमेड कपडा, कस्मेटिक सामाग्रीहरु, मोवाइल र किचनका सामाग्रीहरु रहने छ ।
जिल्ला भन्दा बाहिरका ब्यापारीलाई भदौं २५ गते पछि मात्रै आयोजकले स्टल विक्रिको लागि खुल्ला गर्ने सहमती भएको नुवाकोट उद्योग बाणिज्य संघले जनाएको छ ।
नुवाकोट उद्योग बाणिज्य संघले दसैंको अवसरमा कुनै पनि खालको उत्सव महोत्सव कुनै संघ संस्थाले जिल्ला भित्र यो भन्दा पछि गर्न नपाउने भनेर पनि निर्णय गरेको छ । स्थानीय ब्यवसायीहरुको मुख्य कमाई हुने समयमा महोत्सव आयोजना गरिदा धेरै रकम जिल्लाबाट बाहिरिने भएकोले चाडपर्वको अवसरमा अबका दिनमा महोत्सव गर्न नपाउने निर्णय गरेको नुवाकोट उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष ताराबहादुर कार्कीले बताउनुभएको छ ।
यसै बीच, बिबिध साँस्कृतिक मनोरञ्जनात्मक सस्तो सुलभ बजार नारा दिएर आयोजना गरिएको दोश्रो नुवाकोट दसैं महोत्सवमा स्थानीय उत्पादन र कला संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिइने बताइएको छ । १० दिनसम्म सञ्चालन हुने महोत्सवमा कृषि उपजको प्रदर्शनी, घरेलु तथा हस्तकलामा सामग्रीको प्रदर्शनी तथा विक्रि हुने छ ।
महोत्सव आयोजक मुल सामारोह समितिका अध्यक्ष शिव खड्गेका अनुसार स्थानीय उत्पादनको प्रबद्र्धन र विक्रीबाट जिल्लामा आर्थिक पक्ष बलियो पार्ने र दसैंलाई मनोरञ्जनात्मक बनाइने छ ।
महोत्सवमा राष्ट्रिय कलाकारहरुको साँस्कृतिक प्रस्तुत रहने छ । दोश्रो नुवाकोट दसैं महोत्सवमा १ सय देखि १ सय २५ वटासम्म स्टल रहने आयोजक संस्थाका सचिब प्रज्वल सापकोटाले बताउनु भएको छ ।
महोत्सवमा अवधिभरीमा २५ लाख रुपैया आम्दानी हुने र २४ लाख ५ हजार रुपैया खर्च हुने आयोजकले अनुमान गरेको छ । महोत्सव ५० हजार दर्शकले अबलोकन गर्ने पनि अनुमान गरिएको छ । महोत्सवमा रेस्लिङ्गलाई पनि समावेश गरिने भएको छ । धेरै दर्शकहरुले टेलिभिजनमा रुचीका साथ हेर्दै आएको रेस्लिङ्गलाई प्रत्यक्ष रुपमा देखाउनका लागि अन्तराष्ट्रिय खेलाडीहरुको रेस्लिङ्गलाई प्रस्तुत गरिने भएको हो ।
महोत्सवको बारेमा नुवाकोट, रसुवा धादिङ्ग तथा राजधानीमा रहेकाहरुलाई जानकारी दिनको लागि अहिले प्रचार प्रसार अभियानलाई तिब्र पारिएको बताइएको छ ।
तीन वर्ष अघि पनि त्रिशुली युथ स्पोर्टस् क्लवले त्रिशुलीमा दसैं महोत्सवको आयोजना गरेको थियो ।
Posted by image weekly (इमेज साप्ताहिक) at Monday, August 28, 2017 No comments:
बाढीले करोडौंको क्षती, महतद्धारा अबलोकन
नुवाकोट । नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँ पालिकामा चार दिन अघि गएको बाढीका कारण भएको क्षतीको नेपाली काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्य तथा पुर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले अवलोकन गर्नुभएको छ ।
काँग्रेसका कार्यकर्ताहरु र जनप्रतिनिधि लिएर क्षती भएको स्थानमा पुग्नु भएको डा. महतले तत्कालै त्यहा खानेपानी र सिञ्चाई सुचारु गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले सम्वन्धित कार्यालयलमा तत्कालै पानीको मुहान सुचारु गर्न मोवाइलबाटै निर्देशन दिनुभएको छ ।
क्षती भएको स्थानको अनुगमनका लागि जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख सन्तमान तामाङ, सदस्य जगदीश फुँयाल, पञ्चकन्या गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश तामाङ लगायतका जनप्रतिनिधिहरु जानुभएको थियो । उहाँहरुले तत्कालै खानेपानी र सिञ्चाईका लागि आवश्यक ब्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । बाढीले क्षती नपु¥याएको खेतको धानबाली संरक्षणका लागि तुरुन्तै सिञ्चाई आवश्यक रहेको स्थानियहरुले बताएका छन् । मुहान देखि सिञ्चाईको नहर ध्वस्त भएकोले उनीहरुले नेतालाई आवश्यक पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् । सामान्य खोलामा आएको बाढीका कारण साढे दुई सय रोपनी धान खेत बगरमा परिणत भएको स्थानीय राजेन्द्र फुँयालले बताउनुभएको छ । अधिकाँश किसानहरुको भएधरको जमिन बाढीले नगेको भन्दै स्थानीयहरु दुखी भएका छन् । भर्खरै लाखौं लगानी गरेर लगाइएको धान खेत नष्ट हुनुका साथै खेतको संरचनानै ध्वम्स भएको स्थानीय शान्ती बोहोराले बताउनुभएको छ । २०१५ सालमा एक पटक सोही खोलामा बाढी आएको सुनेका त्यहाका स्थानीयहरुले अहिले चार दिन अघिको बाढीका कारण ठुलो क्षती सहनु परेको छ ।
यसै बीच, पञ्चकन्या गाउँपालिकामा वर्षा, बाढी र पहिरोले पु¥याएको क्षतीको विवरण संकलन कार्य सुरु समेत भएको छ ।
जनप्रतिनिधि र जिल्ला कृषि विकास कार्यालय नुवाकोटका प्राविधिकहरुले प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गरी क्षतिको विवरण संकलन थालेका हुन् । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय नुवाकोटका अनुसार कृषि उब्जनी सहित सिँचाई, कुलो, खानेपानी, जमिनको कटानको क्षती विवरण संकलन थालिएको हो ।
संकलन हुने क्षति विवरणका आधारमा कृषकहरुलाई क्षतिपुर्ती दिइने बताइएको छ । अस्ती नौं गते राती आएको अविरल वर्षले नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिकाको वडा नं. २ कविलास र वडा नंं ५ भद्रुटारमा धान लगाइएको खेत नष्ट पारेको थियो । वर्षौ देखि खेती गरिदै आएको उर्बर जमिन अहिले बाढीको कारण बगरमा परिणत भएको छ ।
बाढीका कारण कविलासको हर्रोबोटे, खोलेबगर, अम्बोटे, सिस्नेघारी, चारसय पाmँट, चालिसेको धान खेत नष्ट भएको छ । त्यस्तै भद्रुटारको डुडेवगर, बविसे, क्यामुने, पिप्लेबगर, खोलेबगरमा क्षती पु¥याएको स्थानीयहरुले बताएका छन् ।
प्रारम्भिक अनुमान अनुसार सिञ्चाई र खानेपानीमा डेढ करोड रुपैयाँ बरावारको क्षती भएको छ । खानेपानीको २५ वटा मुहान र सिञ्चाईका १५ वटा मुहना ध्वस्त भएको छ । खानेपानीको पाईप र सिञ्चाईको नहर पनि बाढीले लगेको छ । खेतमा भएको क्षतीको अनुमान साँढे तीन करोडको गरिएको छ ।
बाढीका कारण ठाउँ ठाउँमा पहिरो गएकोले अहिले नयाँ नयाँ ठाउँमा खेत भासिन पनि थालेको छ । तत्कालै संरक्षण गर्न सकेमा रोकथाम हुने भएपनि आफ्नो मुख्य आम्दानीको श्रोत रहेको खेतमा पहिरो लाग्न लागेको शंकरप्रसाद बोहोरा बताउनुहुन्छ ।
प्रोपर्टी टुडे अनलाईनमा साढे दुई वर्ष अघि प्रकाशन ...
नुवाकोट अदालतमा न्याय खरिद विक्रि हुन थालेको भन्दै...
नुवाकोट जिल्लालाई कात्तिक मसान्तसम्ममा खुल्ला दिसा...